रवि लामिछानेका दाईले भने : “भोलि फूलमाला लगाएर मेरो भाई निस्किन्छ”-(भिडियोसहित)
शालिकराम पुडासैनीको प्रकरणमा न्यूज २४ टिभीका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने यतिवेला प्रहरी हिरासतमा छन् । उनको प क्राउलाई लिएर पक्ष र विपक्ष दुवैमा उत्तिकै माहोल तातिरहेको छ । र, आवाज पनि पक्ष र विपक्ष दुवैमा उत्तिकै बुलन्द बनेका छन् ।
एकथरीले रविलाई व्यक्तिगत रिसिईबी साँध्नको लागि फसाउने प्रपञ्च रचिएको र सोहीअनुसार षड्यन्त्र गरिएको भन्दै चर्को नारावाजी गरिरहेका छन् भने अर्कोथरिले रवि समर्थक भीडतन्त्रले छानबिन र घ ट्नाको अनुशन्धानमा बाधा पुगेको भन्दै गम्भिर ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।
यो प्रकरणलाई लिएर अहिले संसदमा समेत आवाज उठेका छन् । त्यतिमात्रै होईन, यो प्रकरणमा जनमत विभाजित छ । देहत्याग गरेका पत्रकार पुडासैनीको परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि सशक्त बन्दै गएको छ । उता, लामिछानेको परिवारले यो प्रकरणमा रविलाई फसाउन खोजेको दाबी गर्दै आएको छ
बाहिर आएको १३ मिनेटको भिडियो त एउटा भागमात्रै भएको उनको दाबी छ । उनले भने,“उसले आरोप लगाउँदा नाम लियो । रविले अहिले मलाई लखेट्दै गएर चितवन लगेर, त्यहाँ रुममा लगेर देहत्याग बाध्य बनायो त भन्या छैन नि । कुनै सन्दर्भमा उसले रविको नाम लियो । होईन, उसले अरुको पनि नाम लिएको छ ।”शालिकरामले भिडियोमा रविको नाम लिएकोले संलग्नता देखिएपनि पुष्टि हुनुपर्ने बताए । उनले भने,“त्यो एउटा आधार हुनसक्छ, तर प्रमाण हुन सक्दैन् । सँगै काम गर्दा मनमुटाव भयो होला । त्यो त एउटा स्वभाविक प्रक्रिया हो ।”
पछिल्लो समय रविसँग लिईएको बयान र रविसँगै थुनिएका अन्य दुई जनाको पनि बयान लिने काम भएको सुनाउँदै यो प्रकरणमा रविको खासै संलग्नता नदेखिएको कुरा आफूहरुको प्रारम्भिक जानकारीमा आईसकेको पनि हरिशरणको दाबी छ । तर, कानूनको हबला दिएर जसले पनि दुःख दिनसक्नेतर्फ पनि उनले ध्यानाकार्षण गराए । देशमा न्याय नमरेको उनको विश्वास छ । उनले भने,“देशका न्यायमूर्तिहरुले भोलि भन्नुहुन्छ की रवि क्लिन छ कि छैन भनेर, म त पूर्ण विश्वस्त छु, भोलि फूलमाला लगाएर मेरो भाई निस्किन्छ ।”
उसो भए तपाईहरुले अहिले किन जुलुश निकाल्नुभएको त ? भनेर धमलाले सोधेको अर्को प्रश्नमा उनले आफूहरुले अदालतलाई दबाब नदिएको स्पष्ट पारे । उनले अघि प्रष्ट्याए,“होईन, विश्वसनीय वातावरण किन बनेन ? त्यो प्रतिप्रश्न गरौं न हामी । म जुलुशमा गईँन् । मैले एकचोटी अदालत परिसरबाट बाहिर निस्किँदा दुई पटक मैले आफ्ना सार्वजनिक कराहरु राखेको हो । जुलुक स्वतस्र्फूत गएको छ । त्यसमा मेरो व्यक्तिगत संलग्नता छैन् ।”आफूहरु विधिको शासन र कानूनी राज्यको पक्षमा रहेको पनि उनले पटक–पटक विश्वास दिलाए ।
रविले सुरुवातमै यो प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनलाई अनुशन्धानको लागि आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहन्छ भनेर बोलेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,“रविले त एडभान्समै भनेको थियो कि यो धरपकड गर्नै पर्दैन्, कहिले बोलाउनुहुन्छ म त्यही दिन आउँछु भनेको थियो । मानिसहरु पनि जुलुशमा किन आएका छन् ? भन्ने कुरा यसमै केन्द्रित छ । रविलाई दोषी वा निर्दोष कवुल गर्ने कुरा त एउटा प्रक्रियामा गैसक्यो । उसको अनुशन्धान भैरहेको छ ।”